Izindaba - Leyo yibhodlela elidala lempilo entsha, isambulela selanga seCoca-Cola RPET "esihleliwe" Qingdao North Railway Station
Ngo-Agasti, 2020, lapho kuwela khona abahamba ngezinyawo abakhulu beQingdao North Railway Station, kwafakwa izambulela eziningana ezikhethekile, lapho kwaphrintwa khona izinto ezinezici zeQingdao ezifana ne-spray, i-seagull kanye nezakhiwo. Okugqame kakhulu kube ngamagama athi “Bengijwayele ukuba yibhodlela lepulasitiki” nelithi “Siyakhathalela” abhalwe emaphethelweni esambulela, adonse ukunaka kwabahamba ngezinyawo.
Isambulela sihlangene ngani namabhodlela epulasitiki? Kuvele ukuthi lezi zambulela zonke zenziwe ngamabhodlela epulasitiki asetshenziswe kabusha. Ngemuva kokuphinda kusetshenziswe kabusha, amabhodlela epulasitiki angenalutho acutshungulwa ngochungechunge lwezinqubo futhi ekugcineni alukelwa kuhlobo olusha lwendwangu eluhlaza okwemvelo, okuyi-RPET material yendwangu, okuwumqondo omusha emkhakheni wokusebenzisa kabusha izinto. Ungasebenzisa amabhodlela epulasitiki amadala afinyelela kwali-17 ukwenza isambulela selanga futhi empeleni uwasebenzise kabusha.
Kuyaqondakala ukuthi lezi zambulela zelanga ezisuselwa kumqondo wentuthuko esimeme yakwaCoca Cola - “Akukho doti emhlabeni”, zenzelwe ukutshela umjikelezo wempilo ogcwele wePET, ukuze abantu abaningi bakwazi ukuqonda izakhiwo zezinsizakusebenza zepulasitiki lePET kanye ukubaluleka kokuphinda kusetshenziswe kabusha.
Kuyo yonke le minyaka, iCofCO Coca-Cola (Shandong) Co, Ltd. izibophezele ekusizeni ukudala ubuhle bedolobha, impucuko kanye nokuvikelwa kwemvelo, kugxilwe emisha nasenhlalakahleni yomphakathi, ukwakha ngokuhlanganyela ukwakhiwa kwempucuko yasedolobheni iQingdao .
Indwangu eyenziwe ngocingo olwenziwe kabusha ngokusetshenziswa kabusha kwe- “Coke bottle” ingavuselelwa ibe yi-PET fiber ngezinto ezingama-100 ezenziwe kabusha, ezinganciphisa imfucuza ngempumelelo. Njengamanje, ukusetshenziswa kwamabhodlela okuphuza epulasitiki e-PET kuphakeme kakhulu eChina. Ukuvuselelwa kwamabhodlela esiphuzo alahliwe e-PET akungeke kwehlise ukungcoliswa kwemvelo kuphela, kepha futhi kuguqula imfucuza ibe yingcebo.
Kwi-PVC equkethe i-chlorine (ingumthombo oyinhloko we-dioxin ne-dioxin efakazelwa ama-carcinogens) futhi iqukethe ukungcoliswa kwemvelo kwezinsimbi ezisindayo, i-plasticizer, njll., Kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva, ukukhiqizwa kwe-Taiwan akuqukethe i-PVC, okuqukethwe yensimbi esindayo futhi cishe akunakukwazi Linganiswa, linikezelwe ukufaka esikhundleni semikhiqizo ye-PVC, libe yisizukulwane esisha somhlinzeki wezinto zokuvikela imvelo.